About Us - Airpull (Shanghai) Hlunga Co., Ltd
Kwaqalwa ngo 1996, Airpull (Shanghai) Hlunga uye kusukela zikhula zibe nomkhiqizi eqondile emoyeni compressor izihlungi. Ngenxa hi-tech kwebhizinisi Chinese endaweni enkathini yesimanje, inkampani yethu iye yabonisa Ikhono onguchwepheshe design, zokukhiqiza, kanye nokusabalalisa. Sinikeza ezihlukahlukene emoyeni compressor esikhundleni izingxenye kuhlanganise izingxenye ephezulu grade ezifana emoyeni izihlungi, uwoyela ehlunga, namafutha emoyeni separators. Le mikhiqizo ahloselwe ngokukhethekile kube iyahambisana brand owaziwa ezifana Atlas Copco, Kaeser, Ingersoll Rand, Compair, Sullair futhi Fusheng. Ngaphezu emoyeni compressor izihlungi, singakwazi futhi ukukhiqiza izihlungi uwoyela wokubacindezela kanye ngezimoto izihlungi amakhasimende ethu.
elungiselelwe platform yethu ibhizinisi yokusebenza kufaka amasu management system ukuthi prioritizes emisha, ukuhwebelana kwembulunga yonke, kanye nokunakekelwa kwamakhasimende. Imodeli inkampani ukuphathwa kwabasebenzi yakhelwe zikhuthaza ukukhula ithalente ngabanye. Sikhuthaza yokufunda eqhubekayo izifundo njalo okuhleliwe kanye nezingxoxo. Abasebenzi bethu enekhono iye ifundiswe isiqinisekiso izinqubo izinga kahle.
Buzeli yokuvikela imvelo kanye esikhethiweyo "Green Enterprise", siye yaletha Airpull (Shanghai) Hlunga isinyathelo sokuba eco-friendly futhi amandla imikhiqizo kahle. Zonke izinto isihlungi aqukethe premium HV ingilazi-fibre isisefo sephepha, amazwe ase-United States futhi eJalimane. Substrate American nesiJalimane ikhulisa kahle zokuhlunga ukunciphisa izindleko ngenkathi nokwelula ezingaba inkonzo nokuphila komoya compressors. Advanced imishini ukukhiqizwa futhi amasu yokukhiqiza elicwengiweyo baye bavumela ukuba sifinyelele ikhiqiza amandla yonyaka amayunithi ayizinkulungwane 600. I ISO9001: 2008 Quality Management System isebenza.
Nge Shanghai njengoba ethu-of-imisebenzi, sikhipha jikelele kwizingxenye kuhlanganise Europe, i-Ningizimu Melika, South-East Asia, Middle East, njll Sine distributor okhethwe Thailand namanxusa emazweni efana Iran nePakistan. Domestically, inethiwekhi inkonzo yethu inikeza Ukusabalala ngokugcwele lonke.
Ngo-1996, saqala yokukhiqiza isihlungi cartridges for izihlungi ezintathu quintessential yezimoto.
Ngo-2002, ububanzi zethu of lunye lubandakanye izihlungi isikulufa emoyeni compressors.
Ngo-2008, imboni entsha kwakhiwa. Inkampani yethu phathelana bhalisiwe ngaphansi kwegama Airpull (Shanghai) Hlunga.
Ngowezi-2010, esungulwe Amahhovisi ezindaweni ezikahle ezifana Chengdu, Xi'an, futhi Baotou.
Ngo-2012, BSC kokwenziwa komsebenzi uhlelo waqalwa. Lokhu lithathelwe ngempumelelo esifaka ubuchwepheshe obusha kusukela kokubili imithombo ezifuywayo angaphandle ku repertoire yethu.
Kusukela 2012 kuya ku-2014, imakethe yethu global bekulokhu sasikhula masinyane, futhi siye ukuwo ngempumelelo Hannover Messe baseJalimane PCVExpo eRussia.